၅။ Wavepay အားရွေးချယ်၍ click နှိပ်ပေးပြီး "Continue" အား ထပ်မံနှိပ်ပေးပါ။
5. Please select and click Wavepay and then click "Continue".
၆။ မိမိထည့်သွင်းခဲ့သော အချက်လက် အကျဉ်းချုပ်အား ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးနောက် "Pay With Wavepay" ကို နှိပ်ပေးပါ။
6. Kindly check your provided information summary and then click "Pay With Wavepay".
၇။ မိမိ Wavepay account ပြုလုပ်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်အား ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၉ မှစ၍ ရိုက်နှိပ်ပြီးထည့်သွင်းပေးပါ။ (ဥပမာ သင်၏ဖုန်းနံပါတ် "09791234567" အစား "9791234567" သာ ရိုက်ထည့်ပေးပါရန်။)
7. Please insert your wavepay account phone number as shown in figure. (Eg, Let your phone number is "09791234567", you just need to push "9791234567")
၈။ ထို့နောက် အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပေါ်လာပါက ယခုရောက်ရှိနေသော Browser အား ပိတ်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် refresh ပြုလုပ်ခြင်းမလုပ်ဘဲ မိမိ၏ဖုန်းအတွင်းရှိ Wavepay application ထဲသို့ဝင်ရောက်ပေးပါ။ (ဖုန်းသီးသန့်အသုံးပြုများအနေဖြင့် ဖုန်း၏ Home ဖြင့် ခေတ္တ ထွက်ပြီး WavePay application ထဲ ဝင်ပေးပါ)
8. After that when there isaview appeared as shown in following figure, please go to your Wave application in your mobile phone without closing for refreshing current browser tab. (For mobile only use, click mobile's Home button and enter WavePay application)
မိမိဖုန်းအတွင်းရှိ Wave Application အား အသုံးပြုပုံ လမ်းညွှန် (Instructions of using Wave application in your mobile phone)
၈.၁ | ပထမ အဆင့်အနေဖြင့် အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသော WavePay ပုံစံလေးအား နှိပ်ပေးပါ။
8.1 | As frist step, please click WavePay apk as show below.
၈.၂ | ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့် အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း WavePay application အတွင်းရှိ ညာဘက်အောက်ထောင့်တွင်ရှိသော "Inbox" အား နှိပ်ပေးပါ။
8.2 | As second step, please click "Inbox" icon which located on corner of right-bottom of WavePay application as show below.
၈.၃ | တတိယအဆင့် အနေဖြင့် အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ အဖြူရောင်နောက်ခံဖြင့် လက်မှတ်ဈေးနှုန်း တက်လာပါက မိမိဝယ်ယူလိုသော ဈေးနှုန်း ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပြီး နှိပ်ပေးပါ။ (အဖြူရောင်နောက်ခံဖြင့် ဈေးနှုန်းမပေါ်သေးပါက စာမျက်နှာအား အောက်သို့ ပွတ်ဆွဲချပေးပြီး ပြန်လည် ရှာဖွေပေးပါ)
8.3 | As third step when the ticket price with white background appeared which as shown in figure below, please check the prices that you want to buy or not. (If the ticket price with white background doesn't appear, please pull down the screen and search again)
၈.၄ | ထို့နောက် အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လက်မှတ်ဈေးနှုန်းအား တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအား ထပ်မံစစ်ဆေးပြီးပါက "Continue" အား နှိပ်ပေးပါ။
8.4 | Then you will see ticket price as show below and check your ticket amount again. Then click "Continue".
၈.၅ | နောက်ဆုံးအဆင့် လက်မှတ်ဝယ်ယူရန် သေချာပြီ ဆိုပါက အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အစက် လေးစက် နေရာတွင် မိမိ WavePay အကောင့်၏ pin နံပါတ်(password) အား ဖြည့်ပေးပြီးနောက် "Pay Now" အား နှိပ်ပေးပြီး ခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပါ။
8.5 | As last step if you sure to buy the ticket, please fill your pin numbers(your WavePay account's password) on the4dots as shown in figure below and then click "Pay Now" and wait forawhile patiently.
၈.၆ | ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်သွားပါက အောက်ပါပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ငွေပေးချေမှု ဘောင်ချာပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာအား screenshot ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းပြီးမှ "OK" အား နှိပ်ပေးပါ။
8.6 | When the payment is successful, you need to keep your voucher slice by doing screenshot as shown in figure below and then click "OK".
အထက်ပါ အဆင့်များသည် Elite Express Website မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ Website အား အသုံးမပြုပဲ Wavepay application မှလည်း Elite ကားလက်မှတ်များအား တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
The upper steps aimed only for the customer who purchase via Elite Express Website. Elite Express tickets can purchase directly from the Wavepay application without using Website.